Tatoazy mandatsa-dranomaso sy ny dikany | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy mandatsa-dranomaso sy ny dikany
Antonio Fdez | | Tatoazy misy endrika, Tatoazy zavatra sy zavatra
Na dia tsy hiresaka amin'ny antsipiriany momba ny fifandraisana izay nitazomana ny tontolon'ny tatoazy aza isika tamin'ny niandohany tamin'ny tontolon'ny heloka bevava sy ny "fiainana ratsy", dia mazava fa androany io zava-misy io dia efa zavatra taloha ary ankehitriny entintsika ny tatoazy iray na maromaro dia tsy mitovy hevitra amin'ny hoe olona ratsy. Indrisy Mba hahatongavana amin'ny toe-javatra misy olona maro dia manohy manana io hevitra io momba ny zavakanto amin'ny fanaovana tatoazy, misy karazana tatoazy izay nisy fiantraikany mivantana. Ohatra, miresaka ireo tatoazy mifandraika amin'ireo gadra aho.
Ary io dia, araka ny fantatsika tsara sy nanehoantsika hevitra indraindray Ny fanaovana tatoazy, arak'ireo faritra eran'izao tontolo izao, ao anatin'ny fonja dia misy voambolana tena izy sy fomba fifandraisana amin'ny alàlan'ny tombokavatsa. Miankina amin'ny tatoazy anananao sy ny toerana misy azy amin'ny vatanao no handefasanao hafatra amin'ny sisa amin'ireo gadra. Na eo aza izany, ary araka ny nolazaiko dia tsy fotoana tokony hiresahana izany na dia hiatrika karazana tatoazy marefo aza isika.
Ny tiako holazaina dia ny Tatoazy mandatsa-dranomaso sy ny dikany. Drafitra an'ohatra lalina izy ireo ary, raha vita amin'ny toerana voajanahariny izy ireo, izany hoe eo ambany mason'ny maso dia tokony hodinihina amin'ny fomba feno fandinihana ny fanapahan-kevitra. Tsy tokony hohamaivanina velively izy io satria tatoazy tena mampiavaka azy io izay mety hiteraka fahadisoana ary hitondra anao olana mihoatra ny iray, na dia tsy tokony ho toy izany aza.
Araka ny efa nolazainay, Ny tatoazy mandatsa-dranomaso dia iray amin'ireo tatoazy izay nifandraika tamin'ny tontolon'ny fonja sy an'ny andian-jiolahimboto voarindra. Ny tatoazy mandatsa-dranomaso dia matetika no manao tombokavatsa eo an-joron'ny maso na eo amin'ny takolaka ao ambaniny. Fomban-drazana no nanolorany ny fotoana lanin'ny olona tany am-ponja. Na dia izany aza dia matetika no natao tatoazy izy ireo mba hahatsiarovany fa nandia fotoana nampanaintaina sy nampalahelo tamin'ny fiainantsika izahay.
Etsy ankilany, tatoazy mandatsa-dranomasoMiankina amin'ny isan'ny tatoazy ranomaso, izy ireo koa dia afaka maneho ny isan'ny olona novonoin'ilay voafonja.
Sarin'ny Tatoazy Ranomaso
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy misy endrika » Tatoazy mandatsa-dranomaso sy ny dikany
Ny dikan'ny tatoazy lambo, mariky ny tanjaka
Tatoazy ho an'ny taovolo, coiffeurs ary stylists